सीआईडी ​​- Geofumadas अभ्यस्त सन्दर्भमा BIM सिक्ने र सिकाउने को अनुभव
डिसेम्बर, 2018 अटोक्याड-Autodesk, शिक्षण CAD / जीआईएस, Microstation-बेन्टले
कम्तिमा तीन अवसरहरूमा गेब्रिएलासँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ। पहिलो, विश्वविद्यालयको ती कक्षाहरूमा जहाँ हामी सिभिल इन्जीनियरिंग संकायमा लगभग मिल्दछौं; त्यसपछि निर्माण टेक्निशियनको व्यावहारिक कक्षामा र पछि टनेलबोरिंग कम्पनीको साथ होन्डुरासको उत्तरी भागमा कुइमेल क्षेत्रको रियो फ्रियो बाँधको परियोजनामा। म मेरो चुनौतीमा नियोडाटा कार्यान्वयन गर्दैछु र सर्भेयरहरूले ती पुराना उपकरणहरू कसरी छोडे र म्यूनिखबाट आउँदै गरेको नयाँ लाइका प्रयोग गर्न सिके जुन पहिले नै बार कोडसँग रह्यो; उनी प्रशासनिक र टेक्निकलको लागि लडिरहेकी छिन् एक पागलपनको तालमा जान कोलम्बियाली हाकिम र अर्का जर्मन।
हाम्रो भर्खरको कुराकानी यति चाखलाग्दो थियो कि हामीले यसलाई लेखमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यौं। आज, म उनलाई सामान्यतया बोलाउँदछु, सम्भवतः यस सन्दर्भमा पहिलो बिम व्यवस्थापन मास्टर हो, जहाँ उनी मुटुमा होन्डुरन छिन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलताको छेउमा आशावादी भन्दा बढी।
हालैका वर्षहरूमा भौगोमाडास मैले BIM को बारेमा कुरा गरें, जबकि अधिक अप्रत्यक्ष रूपमा। के तपाईं महत्वको केन्द्रबिन्दुको लागि हामीलाई यसको बारेमा थोरै प्रसual्गमा पार्नुहुन्छ?
खैर, धेरैले पहिले नै BIM (बिल्डिंग सूचना मोडलि।) को बारेमा सुनेका छन्, धेरैले बुझ्दैनन् कि कम्पनीहरूमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न BIM विधि कसरी सिक्ने हो। सायद यसलाई लिनको लागि एउटा तरिका तपाईंलाई मेरो BIM वातावरणमा मेरो Revit विद्यार्थीहरू (आर्किटेक्चर, MEP र संरचनात्मक) का प्रभावहरू बताउनु हो, सुरुमा परिभाषाहरू परिभाषित गर्नु, र त्यसपछि मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट केही। तपाईँ सोच विचार गर्नुहोस्?।
- तर पक्कै। म सबै कान छु।
पहिलो स्थानमा, जो अझै पनि संक्षिप्त शब्द BIM सुन्नुहोस्, शान्त, हामी भन्न सक्छौं कि यो अपेक्षाकृत हालको अवधि हो। भवन सूचना मोडेल (BIM) धेरै रुचि द्वारा साझेदारी डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र पनि रिसाइकिलिंग को सम्पूर्ण जीवन चक्र भर गर्न सक्ने तत्व संग, धेरै डेटाबेस को निर्वाचकगण, एक मोडेल सार्थक जानकारी रूपमा परिभाषित गरिएको छ एउटा भवन। एनबीएसको परिभाषा अधिक वा कम अनुवादित (राष्ट्रिय भवन विशिष्टता).
त्यसकारण यस पद्धतिको महत्त्व, र त्यसैले यो विकसित देशहरूमा यति ठूलो स्वीकृति भएको छ। किनकि यसले हामीलाई छिटो काम गर्न, सहकार्यमा, पूरै डिजिटल फाइलहरूको साथ, उत्तम दृश्यता र योजनाको साथ अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, राम्रा नियन्त्रणहरू, द्वन्द्व पत्ता लगाउने, लागत बचत, फोहोर घटाउने र कम समयमा सबैको साथ अवस्थित नियमहरू बमोजिम हाम्रा परियोजनाहरू निरन्तर व्यवस्थित गर्नुहोस्।
- यो राम्रो लाग््छ।
निस्सन्देह यो धेरै राम्रो लाग््छ! यद्यपि कहिलेकाहीँ सिद्धान्त अभ्यास गर्न लागू हुँदैन, मुख्यतः हाम्रो विकासशील देशहरूमा जहाँ हाम्रो आर्थिक स्रोत सीमित छ। तैपनि, मलाई लाग्छ कि BIM चाँडो वा पछि सफल हुनेछ।
-Welll, तर सुरु बाट यति निराशावादी जाँदैन। मेरो पाठकहरुलाई भन्नुहोस् तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो।
ठीक छ My एक सल्लाहकार र कोच बीआईएम को रूप मा मेरो व्यक्तिगत अनुभव देखि। हाम्रो मध्य अमेरिकी देशहरूमा, सीएडी अझै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ धेरै कम पेशेवरहरू छन् जुन रिभिट र सबैभन्दा बढी मात्र रिटिट आर्किटेक्चर प्रयोग गर्छन्; तिनीहरू एक्लै काम गरिरहेका द्वीपहरू हुन्। मैले कम्पनीहरुको बारे सुनेको छु जहाँ आर्किटेक्टले रिटिटमा आफ्नो वास्तुकला मोडेल बनाउँछ, त्यसपछि AutoCAD लाई चलाउँछ ताकि अन्य ठेकेदार र डिजाइनरले यो काम गर्न सक्दछ। यो साँच्चै समयको बर्बाद हो।
यसैले जिद्दी, यदि हामी बीआईएमसँग काम गर्दैछौं भने हामीले कम्पनीमा काम गर्ने डिजाइनरहरू मात्र नभई परामर्शदाता र ठेकेदारहरूलाई पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाम दिनको लागि तालिम दिनै पर्छ। मैले मेरो देशमा धेरै पेशेवरहरू देखेको छु जुन उनीहरूको डिग्रीसँग सन्तुष्ट छन् र उनीहरू अध्ययन गर्न चाहँदैनन्, तिनीहरू सुधार गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू AutoCAD सँगै बस्छन् र त्यहीं चीज मर्दछ। यो कालो र सेतो टेलिभिजनको युगमा बस्नु जस्तै हो जब त्यहाँ सम्पूर्ण डिजिटल विश्व हाम्रो पर्खाइमा छ।
-मैले बुझें, परिवर्तन र स्थिरताको लागि त्यो प्रतिक्रिया यी संदर्भहरूमा सामान्य छ। तर के तपाईंले होन्डुरसमा कुनै BIM कार्यान्वयन देख्नुभएको छ?
म सबै सत्य छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा मैले अझै पनि कम्पनीहरूमा BIM कार्यान्वयनहरू देखेको छैन -methodology को बारे मा कुरा गरदै, 3D मोडेलिंग र केवल प्रतिपादन नहीं - कहिलेकाहीं यसलाई अलिकति निराशा छ र म ू र बारेमा समयमा पहिले नै booming छ सायद 10 वर्ष मा फर्कन एक हजार पटक लाग्छ। यो अन्य देशहरूमा सबै BIM नौकरी प्रस्ताव अद्भुत छ, निस्सन्देही यो धेरै कारणहरूको निर्णय गर्न सजिलो छैन -अहिलेका लागि-.
- र तपाईले यो प्रभावलाई के सोच्नुहुन्छ ताकि BIM हामी गतिको अपेक्षामा हिड्दैनौं?
त्यहाँ धेरै सामाजिक र आर्थिक कारकहरू संलग्न छन् जुन म तपाईंलाई अर्को प्रकाशनमा बताउनेछु किन बिमले मध्य अमेरिकी देशहरूमा बसाउन बन्द गरेन। सकारात्मक पक्षलाई हेरेर, मैले पूर्ण रवीटमा निर्माण पेशेवरहरूलाई प्रशिक्षण दिने अवसर पाएको छु र मैले उनीहरूलाई बीआईएम परिचय गर्ने अवसर लिएको छु। बालुवाको अन्न ... तिनीहरू मध्ये धेरैले यो कहिल्यै सुनेका छैनन्, तर जब उनीहरू प्रस्तुतीकरण गर्छन् उनीहरूलाई रूचि हुन्छ; जटिल परियोजनाहरू गर्न सक्षम हुन, रेन्डरहरू, दृश्य भाग। म सैद्धांतिक पक्षमा जोड दिन कोशिस गर्दछु, कसरी उनीहरूले आफ्नो परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ, म तपाईंलाई केहि BIM कार्यक्रमहरू देखाउँछु जुन बजारमा विद्यमान छ AutoDesk Revit, Bentley AECOsim, ArchiCAD, म्यानुअलहरू र BIM नियमहरू जुन अस्तित्वमा छन्, यसले विश्वव्यापी रूपमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ। म तिनीहरूलाई सिकाउँछु कि BIM सफ्टवेयर वा थ्रीडी मोडल होईन, केही व्यक्तिहरूको धारणाको विपरीत हो, यो एक कार्यविधि हो।
- म थोरै बुझ्छु। म ती दिनहरूमा अटोक्याड प्रशिक्षक थिए जब तपाईले रेखाचित्र तालिका, कम्पास, समानान्तर शासक, इरेजर खोपडी, सर्कल, अफसेट, ट्रिम कमाण्डहरूका बीच समानताहरू बनाउनु पर्ने थियो ...
यस चित्रको BIM गोदामको समीक्षा, यसले मेरा विद्यार्थीहरू र पेशेवरहरूलाई चकित तुल्याउँछ जसलाई म भाषण दिन्छु। विकसित देशहरूमा बिमको ठूलो पहुँच छ; केही देशहरूमा यो पहिले नै एक सरकारी नियमन छ। जब हामी वर्गहरू सुरू गर्दछौं, तिनीहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् रेविटमा मोडेल गर्न कत्ति सजिलो छ। म वास्तवमा Revit को तुलनामा AutoCAD जटिल विचार गर्दछु किनकि यो मोडलि go्ग गर्न जान सजिलो छ र सबै कसरी आकार लिइरहेको छ भनेर हेर्नुहोस्। तिनीहरू यात्रा र भिडियोहरू गर्दा, जब तिनीहरू क्यामेराको साथ विचार लिन्छन्, र जब उनीहरूको अन्तिम परिणामहरू हेर्न सक्छन् उत्साहित हुन्छन्।
मैले एक दिन सिभिल इन्जिनियरि studentका विद्यार्थीलाई सोधे कि उनले अटोक्याडबाट रभितमा स्विच गर्ने बारे के सोचे, र उसले मलाई बतायो कि यो लिप बनाउन धेरै समय लाग्यो। त्यसोभए एक पटक तिनीहरू उनीसँग भेट गरे भने, यो अर्कै कुरा हो, हामी घण्टा खर्च गर्न सक्दछौं र तिनीहरू ज्यादै रुचि राख्छन्; समय उड्छ। मसँग विद्यार्थीहरू छन् जुन निर्माण व्यावसायिकहरू जस्तै प्रणाली ईन्जिनियरहरू होइनन् र तिनीहरू समान सिक्छन्, तिनीहरू उत्साहित हुन्छन् किनकि उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो घर डिजाइन गर्ने छन्। धेरै व्यक्तिहरूको विचारको विपरित, बिम कार्यक्रमहरू सिक्न गाह्रो छैन, तर तिनीहरूलाई समर्पण र अभ्यास आवश्यक छ। यदि तपाइँ अ English्ग्रेजीमा अस्वाभावित हुनुहुन्छ भने यो सजिलो हुन्छ किनकि त्यहाँ त्यो भाषामा अनलाइन मद्दत छ, तर तपाईं जहिले पनि स्पेनिशमा मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ।
- म CentroCAD निकारागुआमा BIM कोर्समा थिएँ। अफसोस कि संकटले मलाई बीचमा छोडिदियो र हामीले स्काईपमा पाठ्यक्रम पूरा गर्नुपर्‍यो। तर मलाई सम्झना छ कि व्यावहारिक दृष्टिकोण र बिस्तारै एउटा प्रोजेक्टको विकास रोमाञ्चक थियो।
हो, क्रमिक प्रक्रियामा व्यावहारिक विकास उत्तम हो। ग्राफिकमा हेर्नुहोस्, घरको आन्तरिक रेन्डरिंग। पहिलो हप्ताको अन्त्यमा, त्यो हो, १ of घण्टाको शिक्षण पछि, म तपाईंलाई तपाईंको पहिलो प्रोजेक्ट छोड्दछु। दुई-कथा घर, दुई दिनमा मोडेल गरिनु। यो आश्चर्यजनक छ कसरी यी BIM मोडेलिंग कार्यक्रमहरूले हाम्रो जीवन सजिलो बनाउँछ, र हामी यत्तिको छिटो काम गर्न सक्दछौं। यहाँ म तपाईंलाई मेरो एक विद्यार्थी द्वारा वितरित एक मोडल देखाउँछु: निकोलले वालाल्लारेर्स.
त्यसोभए हामी रिभिट स्ट्रक्चर र MEP मा जान्छौं र जहाँ चीजहरू रमाईलो हुन्छन् किनभने यो नयाँ हो, मेरो देशका धेरै जसो पाठ्यक्रमहरूमा उनीहरू केवल वास्तुगत Revit दिन्छन्। त्यसैले यी मोडेलहरू एक अर्कोसँग अन्तर्क्रिया गरेको देख्न धेरै चाखलाग्दो छ, र BIM सहयोग कसरी गर्ने। तपाईले अनुशासनहरू द्वारा उप-परियोजनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तलका ग्राफहरूमा तपाईं संरचनात्मक मोडेलहरू, प्लम्बिंग फिक्स्चर र मोडलिंग वर्कसेटहरू देख्न सक्नुहुनेछ जब हामी पहिले नै सँगै काम गरिरहेका छौं।
- म Revit संग तपाईंको उत्साह बुझ्दछु। तर तपाईंले मलाई भन्नुभएको छ कि तपाईं तिनीहरूलाई अन्य विकल्पहरू पनि सिकाउनुहुन्छ।
निस्सन्देह, हामीले छलफल गरिसकेका छौ, BIM ले Revit भन्दा बढी छ, बेंटले प्रणालीको दृष्टिकोणबाट पनि, I-Model योजनामा ​​BIM ग्रहण गरिएको छ जसमा परियोजना व्यवस्थापन, रमाईलो सम्पत्ति व्यवस्थापन समावेश छ। तर म Revit प्रयोग गर्दछु लोकप्रियता को कारण AutoCAD यस प्रस in्गमा, Revit भन्दा बढी हेर्दै, तिनीहरूलाई BIM सिद्धान्तहरू सिकाउन। हामी पनि प्रेस्टो (BIM 5D बजेटमा लागू गरिएको), Bentley Synchro (BIM 4D योजनामा ​​लागू गरिएको), Dynamo (प्रोग्रामिंग र Revit को साथ उन्नत मोडलि)), र अन्य कार्यक्रमहरूको प्रस्तुतीकरणहरू देख्न सक्छौं, उनीहरूलाई सुधार गर्न अन्य कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्न काँटा छोड्नुहोस्। पेशेवरहरु
- मलाई बताउनुहोस् तपाईंको एजेन्डा कसरी निम्न दिनहरुमा छ।
अब हामी एक नविसवर्क पाठ्यक्रम सुरु गर्ने मौका पाउनेछौं र मैले बिम एक्सएनएनक्सएक्स (प्लानिंग) लाई अगाडी सानो समूह संग अगाडी बढ्न उत्साहित छु। BIM मा सिकाउन धेरै छ, र मान्छे यो सबै थाहा छैन। जहाँसम्म त्यहाँ इन्टरनेटमा जानकारी छ, त्यहाँ सँधै अनुसन्धान अनुसन्धान संस्कृति छैन, तिनीहरू तिनीहरू के थाहा छन् सीमित छन्। त्यो एक ठूलो गल्ती हो जुन चाँडो वा पछि पास हुन्छ, किनभने त्यो मरिसकेको छैन।
- र पाठ्यक्रमको अन्तमा विद्यार्थीहरूको प्रकाशिकीको तपाईंको धारणा के हो?
म यो पुष्टि गर्न सक्छु कि मेरो विद्यार्थी, पाठ्यक्रम पाउँदा एक कट्टरपंथी परिवर्तन दिनुहोस्, तिनीहरूको कल्पना यो BIM संसार र डिजिटल क्रांतिमा प्राप्त गर्न सक्ने सबै सम्भावनाहरूको लागि खुला छ। यो जस्तो कि तिनीहरूले राम्रो थाहा छ र फिर्ता जान सक्दैन। AutoCAD अहिले पर्याप्त छैन।
-म तपाईँसँग सहमत छु। AutoCAD पाठ्यक्रमहरूको लागि खोजी Google मा हावी छ। पाठ्यक्रम पछाडि यी विद्यार्थीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ?
मुद्दा यो हो कि हामी कर्मचारीहरु लाई प्रशिक्षित गर्न सक्दछौं, तिनीहरूलाई फरक तुल्याउनुहोस्, तर कम्पनीहरूसँग सफ्टवेयर हुनु पर्छ ताकि उनीहरूले अनुभव प्राप्त गर्न जारी राख्न सक्दछ। मैले एक आर्किटेक्टरलाई भेटें जसले3आयाममा मोडेल बनाउन सक्दछ, तर उसले AutoCAD मा काम गर्न थालेको थियो किनभने यो कम्पनीमा मात्र एक चीज थियो। यो निराशाजनक छ।
त्यसैले BIM तिर मानसिकता परिवर्तन मात्र डिजाईनरहरूबाट होइन, तर यो टाउको, प्रबन्धकहरू, स्वामीहरू, ग्राहकहरू, प्रोजेक्ट प्रबन्धकहरू र बिल्डर्सहरूमा पुग्नु पर्छ। यसैले हामी परियोजना को एक जीवन चक्र को बारे मा कुरा गर्छन, न केवल डिजाइन स्तर मा। यो एक अभिन्न परिवर्तन हुनु पर्छ जसले सम्पूर्ण कम्पनीलाई असर गर्दछ, किनभने मात्र हामी कसरी हाम्रो बिम BIM सँग प्रोजेक्टको विकासमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हेर्न सक्छौं। छोटो समयमा, विधिगत परिवर्तनले प्रतिज्ञा र समर्पणको अनुकरण गर्दछ।
कुराकानीले मलाई सोच्न बाध्य तुल्यायो। धेरै विचारशील, खास गरी जब हामी यी प्रसंगहरूले टिमोरमा परियोजनाहरू बिमलाई विनियमित गर्न सार्वजनिक नीतिका लागि भएका चुनौतिहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसोभए, आशावादी दृष्टिकोणमा हामीले डिसेम्बर मौसममा क्रिसमसमा कफीको योजना गरेका थियौं।
अनौपचारिक अन्तर्वार्तामा, गेब्रिएला रोड्रिग्स, सिभिल इन्जिनियर, स्पेनको रे जुआन कार्लोस विश्वविद्यालयबाट बिम व्यवस्थापनको लागि मास्टर। Geofumadas.com को सम्पादकको नेतृत्वमा प्रश्नहरू सहित।
Bestseller Autodesk Revit - प्रारम्भिक एक मध्यवर्ती स्तर सम्म१ qu क्विज र अन्तिम परीक्षा समावेश गर्दछ। Revit २०१,, २०१,, २०१,, २०१,, २०२० र २०२१ को प्रयोगकर्ताहरूको लागि।€ 19.99€ 14.99 4.5
पुन: संरचना संरचना 2018 शून्य देखि हीरो सम्मकभरिंग आवश्यक, मध्यवर्ती, र पुन: संरचना संरचना 2018 को उन्नत सुविधाहरू€ 19.99€ 14.99 4.4
सिक्दै Autodesk रिविट एमईपी 2016मकोनिकल, इलेक्ट्रोनिक, र नलसाजी इन्जिनियर्सका लागि भवन निर्माण मोडेलिंग€ 49.99€ 39.99 4.6
पूर्ण शुरुवात गाइड अटोडेस्क पुन: वास्तुकला को लागीएक Autodesk विशेषज्ञ एलिट संग Revit जान्नुहोस्€ 19.99€ 14.99 4.4
पुन: परिवारहरू - शुरुआतबाट प्रोसम्मAutodesk Revit 2020 प्रयोग गरेर परिवारहरू सिर्जना गर्दै€ 99.99€ 79.99 4.6
सिक्ने ओडिओस्क रिविट आर्किटेक्चर 2016वास्तुकला डिजाइनको लागि भवन निर्माण मोडेलिंग€ 49.99€ 39.99 4.3
Revit MEP 2019 अनिवार्य र मध्यवर्तीकभरिंग अनिवार्यहरू, र रेडिट एमईपी २०१ of को मध्यवर्ती सुविधाहरू€ 19.99€ 14.99 4.5
Bestseller पुनर्मिलन वास्तुकला २०२० शून्यबाट हीरो सम्मRevit आर्किटेक्चर २०२० को आवश्यक, मध्यवर्ती, र उन्नत सुविधाहरू कभर गर्दै€ 19.99€ 14.99 4.5
Revit आर्किटेक्चर - एक परम गाइडअवधारणा, उपकरणहरू र कार्यप्रवाहहरू जान्नुहोस् तपाईलाई आत्मविश्वासले कार्य गर्न अनुमति दिनको लागि आटोड्सक रिभिट २०२१ भित्र।€ 99.99€ 79.99 4.4
पुन: संरचना संरचना 2021 शून्य देखि हीरो सम्मकभरिंग आवश्यक, मध्यवर्ती, र पुन: संरचना संरचना 2021 को उन्नत सुविधाहरू€ 19.99€ 14.99 4.7
परियोजनाको साथ शुरुवात संग 2019 वास्तुकला पाठ्यक्रम रिविट गर्नुहोस्परियोजना आधारित रिटिट कोर्स€ 39.99€ 31.99 4.3
उन्नत पुन: सम्पादन आर्किटेक्चर 2016 प्रशिक्षणआर्किटेक्टहरूको लागि परियोजना-आधारित भवन निर्माण जानकारी मोडलि withको साथ आधारभूतहरू पछाडि जानुहोस्€ 49.99€ 39.99 4.5
आर्किटेक्चर र BIM - आधारभूत को लागी औडोडस्क पुन: अन्वेषण गर्दैयो कोर्स आर्किटेक्टहरू, इन्टीरियर डिजाइनरहरू, भवन जानकारी मोडलरहरू, र डिजाइन पेशेवरहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो€ 24.99€ 19.99 4.5
Autodesk Revit २०२० - BIM उपकरण कोर्सको साथ ब्रिज मोडलि।बिल्डिंग सूचना मोडलिing (BIM) उपकरण€ 49.99 4.6
शुरुआतबाट प्रोफेशनल (शुरुआत) मा अटोडस्क पुन: परिवर्तनस्ट्रक्चरल र मेप मूलभूतको साथ वास्तुकला डिजाइन।€ 19.99€ 14.99 3.8
Bestseller HVAC (PART2) Revit MEP र व्यावहारिक परियोजनाहरूको साथकार्यक्रम र लेआउट (एक पूरा परियोजना समावेश) को साथ ताप ताप र वातानुकूलित मा तपाईंको व्यावहारिक गाइड।€ 139.99€ 119.99 4.5
अटोडस्क पुनरीक्षण २०२१ पूर्ण शुरुवात गाइडRevit BIM सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्€ 199.99€ 159.99 4.6
अटोडेस्क पुन: संरचना संरचना 2016 सिक्दैस्ट्रक्चरल ईन्जिनियरिंगको लागि जानकारी जानकारी मोडलि Information डिजाइन र विश्लेषण€ 49.99€ 39.99 4.3
रिभिट २०२१ परिवार डाइनामो २. for को लागि शिफ्टि Cre सिर्जना सिर्जना गर्दछप्रकार र ईन्स्टान्स परिवर्तनहरू सिर्जना गर्न डायनामोको साथ निर्बाध रूपमा काम गर्नको लागि तपाईंको पारिवारिक मोडेलिंग क्षमताहरू विस्तार गर्नुहोस्।€ 29.99€ 23.99 4.8
Revit आर्किटेक्चर | रिटिभ ईन्टिरि रेन्डरिंग ह्याक्स सिक्नुहोस्इन्टिरि मोडलिing र रेन्डरिंग ह्याक्स रिभिट सिक्नुहोस्€ 19.99€ 14.99 4.2
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो लाइका एयरबोर्न सिटीमप्पर - शहर म्यापि forको लागि रोचक समाधान
अर्को पोस्ट भेनेजुएला छोड्दै कोलम्बिया - मेरो ओडिसीअर्को »
एउटा जवाफलाई "सीएडीको अभ्यर्थीमा BIM सिक्ने र सिकाउनेको अनुभव"
Amilcar Paz भन्छिन्:
डिजाइनको लागि कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट योगदान।